Mareykanka oo ku sheegay dhibaatada al-Shabaab ay ku heyso Bariga Afrika ay jiri doonto… – Hagaag.com
Mareykanka oo ku sheegay dhibaatada al-Shabaab ay ku heyso Bariga Afrika ay jiri doonto…
Mareykanka ayaa soo saaray digniin hor leh oo ku saabsan dhibaatada kooxda Al shabab ay ku heyso wadamada Bariga Afrika ayna jiri doonto sanadaha soo aadan,sida lagu xusay warbixin ka soo baxsay saraakiisha Sirdoonka.
Warbixintaan oo la soo saaray 29-kii bishii hore ee Janaayo ayaa lagu sheegay in dhibaatada kooxda al Shabaab in la dhimay balse uu jiro musuq maasuq iyo isku xirnaan la’aan laamaha amniga dowlada Soomaaliya.
Mareykanka ayaa dhanka kale sheegay in Al Shabaab ay marwalba awood u leedahay in ay fuliso weeraro xoogan maadama aysan ku filneyn in amniga ay sugaan ciidanka nabad ilaalinta Midowga Afrika ee Amisom ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya.
Soomaaliya ayaa xiligaan waxaa ku sugan in ka badan 20-kun oo askari kuwaasi oo ka socda wadamada Midowga Afrika gaar ahaan dalalka dariska la ah Soomaaliya.
Warbixintan ay shaaciyeen ciidanka sirdoonka Mareykanka ayaa ah mid sanadle ah oo looga hadlo guud ahaan amniga caalamka.